रवि लामिछानेलाई किन जोडियो राजावादीसँग ? जोडिनुको कारण निकिता बनिन् ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/रवि लामिछानेलाई किन जोडियो राजावादीसँग ? जोडिनुको कारण निकिता बनिन् !
रवि लामिछानेको लोकप्रीयता शिखरमा पुग्दा प क्राउ पर्नुलाई उनका समर्थकहरुले गम्भीर षड्यन्त्र भनिरहेका छन् । तर, प्रहरी यो मान्न तयार छैन । उसले शालिकरामको देहत्याग अघिको भिडियो फुटेजलाई आधार मानेर दुरुत्साहनमो अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सडकमा लामिछानेका समर्थकहरुको संख्या र शैली देखेर सत्तारुढ दलले राजावादीको भूमिका देखेको छ ।
राजावादी मिसिनुको आशंका र आरोपमा निकिता पौडेल पनि कारण हुन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता उद्धव पौडेलकी छोरी हुन् । निकिताको पृष्ठभूमि राजावादी रहेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष समेत भइसकेकी उनी अहिले सक्रिय भएकी छिन् । शालिकराम पुडासैनीको अघिको भिडियो लिक गरेको भन्दै प्रहरी र पत्रकारविरुद्ध उजूरी गर्न प्रहरीसम्म पुगिन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनको जाहेरी लिन नमानेको विषय अहिले चर्चामा छ । रिपोटर्स क्लब
सोलुखुम्बुको प्रहरी चौकी आक्रमण भएको स्थानमा हेलिकप्टरबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाईयो !